SPY118 - Fakan-tsary miafina kely maivana kokoa - Manohana karatra TF - Vahaolana OMG
SPY118 - Fakan-tsary miafina kely maivana kokoa - Tohano karatra TF
1080P HD maivana kokoa ny Hidden Spy Camera dia misy fakan-tsary miafina 1080P HD mamela anao hisambotra horonantsary 1080P HD, nanasongadinana jiro. Ny horonan-tsary 1080P HD dia ahafahanao mahita tsara ny zava-mitranga rehefa tsy eo an-trano, birao, orinasa, na aiza ianao no mila filaminana miafina.
Mampifandray ny fakantsary fakantsary fakantsary fakantsary, fahatsiarovan'ny karatra TF.
Ity vokatra ity dia tahirin-tsarimihitra misy tahirin-tsarimihetsika, fakantsary, fakantsary, firaketana irery, fanohanana ho an'ny 32GB.
Asa sarotra, tsara tarehy, tsara tarehy sy azo ampiharina, mora entina.
Azo ampiasaina ho toy ny sanda mihaja sigara sy fakantsary miafina miafina izany.
Ity vokatra ity no loka voalohany hd horonan-tsary hd horonan-tsary mini DV izay manohana ny memory memory TF. Ity vokatra dia mora ny miasa sy kely, azo ampiharina, mora ny hitondra fitaovana ho an'ny fiarovana ny fianakaviana, ny fampianarana sns Mety hijery toy ny tsotra maivana, fa ny 1080P HD Camera maivana Hidden Spy dia manasongadina ny fakan-tsary miafina 1080P HD mamela anao hisambotra 1080P HD video.
Ny horonan-tsary 1080P HD dia ahafahanao mahita tsara ny zava-mitranga rehefa tsy eo an-trano, birao, orinasa, na aiza ianao no mila filaminana miafina.
Fichier horonan-tsary: AVI
Vahaolana amin'ny Video: 1920 ** 1080
Playback device: Rafitra fiasa na mitondra fitaovana mihazakazaka audio sy video
Famaritana: JPG 1280 * 720
Images: 5 megapixel
Fanohanana ny rafitra: Windows ahy / 2000 / xp / 2003 / vista
Storage: SD bitika karatra
Battery sort: Top capacitor lithium batterie
Fitaovana kely kokoa 1080P x1
4.9 X 3.7 X 2.2 santimetatra
SPY118 - Fakan-tsary miafina miafina kely
4333 Total Views 1 Views Today